Siyaasi ka tirsan xisbiga SD oo dacwad loogu oogay gabar yar oo 17 jir oo damcay | Somaliska
Nin lugu sheegay siyaasi ka tirsan xisbiga xag jirka ah ee SD,ayaa haatan lugu soo oogay dacwad ah in gabar yar oo 17 jir uu ku qasbay in ay u soo dirto sawiro iyadoo qaawan ah. Dhacdadan ayaa waxaa ay dhacday sanadkii 2014-kii markaas oo ninkaasi xirriir xagga aaladda skype (iskeeybka) ah la sameeyey.
“Markii hore wuxuu ahaa nin naxariis badan, laakin xagaaggii hore ayey wax xumaadeen, wuxuu doonayey inaan is tuso” ayeytiri gabadha oo u warameeysay booliska. Balse ay u dirtay sawiro iyadoo xabad qaawan raalina ka aheyn. Warsidaha Borås oo amuurtan wax ka qoray ayaa sheegay in lugu xukumay ganaax 50 maalmood ah iyo shan kun oo karoon oo uu siinayo gabadha dhibanaha ah. Ninkan ayaa ku isku difaacay in laga xaday kombiyuuter-kiisa gacan islamarkaasina laga hayey meelo kale. Hase ahaatee baaritaan ay boolisku sameeyeen ayaa lugu ogaaday ineeysan muuqan astaamo ah in meelo kale laga hagayey kombiyuuter-kiisa ee uu ku soo roganayey sawirada gabadha qaawan ee ay u soo direeysay.
Dhinaca kale siyaasigan oo degmadda Borås ka ahaa nin xarrumaha doorashada ka shaqeeynayey islamarkaasina loo doortay inuu maamulka degmadda ka noqdo xildhibaan . Xubno ka tirsan xisbigana waxaa ay sheegeen iney la socdeen eeymaha ninkaasi ee gabdhaha yar yar ku ugaarsanayey. Siyaasiinta ka tirsan xisbigan xag jirka ah ee SD, ayaa mudooyinkii u dambeeyey waxeey saxaafadda dalka siyaasi kale duwan u soo tebin jirtay qaladaadka iyo falalka aan anshaxa laheyn ee ay ku kacayaan.